I-China Filter Mesh ifektri nabahlinzeki | Dongjie
I-mesh ye-1.Filter ibizwa nangokuthi izingxenye zokugcina isitembu, izinto eziyinhloko zemeshini yokuhlunga ifaka insimbi engenasici 201,304,316,316L.Ingaphezulu lingapendwe ngombala wethusi noma wethusi.Lisetshenziselwa kakhulu ukuhlunga amanzi, ukudla kanye nokwelapha okwelapha.I-mesh mesh inezinzuzo ezithile ezifana nefomu elihle lokunyathela, ukumelana okuhle kokuqina, ukumelana nokushisa, ukumelana nengcindezi, anti-ukugqwala. Futhi singenza ngokwezifiso ngokusho kwesidingo nekhasimende lesicelo sakho.
Kunezindlela ezimbili zokukhiqiza inqubo: enye ihlunga yensimbi engenasisekelo igxishwe, icindezelwe, onqenqemeni ngepuleti yensimbi noma ngomjovo wesikhwama sokujikijela, enye iyunithi yensimbi engenasici eyakhiwe ngoqwembe lwensimbi.Indlela ehlukile yomucu wokuhlunga , ubuchwepheshe buyehlukile.
3.Umumo we-mesh yokuhlunga uyindilinga, unxande, u-oval, uphansi, nokunye. Inani lezendlalelo lifaka ungqimba olulodwa, izingqimba eziphindwe kabili, nezendlalelo eziningi, amakhasimende azokhetha ungqimba olulodwa noma ungqimba lomuthi ngokuya ngezinhlelo zawo.
Isikrini sokuhlunga singasusa ngempumelelo ukungcola okungokomzimba ohlelweni lokuqoqa nokuhlunga, ukuvikela imishini yamapayipi, futhi kuthuthukise ukusebenza kwendawo yokuhlunga. Ilungele izihlungi ezahlukahlukene zophethiloli, ukuhlunga koketshezi, kanye nemishini yokuhlanza amanzi.
I-mesh yokuhlunga isetshenziswa ekufakweni komoya komoya, ingalungisa imishini yokuhlanza futhi ivimbele ukungena ngaphakathi kwe-cavity.Filter ngokusebenzisa isikrini, ukugwema ukushiswa kwelanga, ukuze kwandiswe impilo yenkonzo yomshini.
I-Filter mesh ilungele i-distillation, ukumuncwa, ukuhanjiswa kanye nokufayilwa kukaphethiloli, ukucolisiswa uwoyela, imboni yamakhemikhali, umuthi, i-metallurgy, imishini kanye nezinye izimboni.
Esedlule: USomlomo uMesh
Olandelayo: I-Metal Mesh Ebunjiwe
Isihlungi se-Carbon esenziwe